Izakhiwomahhovisi KwaZulu-Natal: Insengwakazi yamaNdiya nabelungu - Bayede News
Ngisho uHulumeni wesifundazwe uyisiqashi. Amabhizinisi aboHlanga athola izimvuthu
Kulabo ababelwela inkululeko okwabe kumqoka wukuthola amandla epolitiki kanjalo namandla ezomnotho. Kusuka ngonyaka we-1994 uHulumeni oholwa yi-African National Congress (ANC) ukutakutana neqhingasu elingaqinisekisa ukuthi lokhu kokubili kuyavezeka. Nokho kukhona umkhakha okubonakala esahluleka khona uHulumeni ukuhlelembela aboHlanga ukuze nabo bangene. Lona umkhakha wentuthuko yezakhiwo. Lo mkhakha uhlukene kathathu; Imboni Yezakhiwo Zohwebo (Imboni Yezakhiwo Ezingamahhovisi, Imboni Yezakhiwo Zokukhiqiza, Imboni Yezakhiwo Zokuthengisa, Imboni Yezakhiwo Zokungcebeleka). Kukhona Imboni Yezakhiwo Zokuhlala (Izindlu Ezizimele, Zokuqashisa, Nezihlalisa Imiphakathi, Amafulethi, Izindluningi nokunye), bese kuba noMhlaba Obekelwe Okuthile.
Ngokwezibalo zeRoyal Institute of Chartered Accountants, amaphesenti angama-70 omnotho emhlabeni avela ebuninini bezakhiwo. Ezweni elinjengeNingizimu Afrika imboni yezakhiwo ineqhaza elikhulu ekuthuthukiseni abantu ngokwezomnotho. Ngokwezibalo zeSouth African Property Owners Association, zonyaka wezi-2015 zengeniso yemali ezweni (Gross Domestic Product) imboni yezakhiwo yaKwaZulu-Natal ifaka amaphesenti ali-16.46 emnothweni wezwe kanti uMasipala omkhulu i-Ethekwni khona ibifaka amaphesenti angama-8.67.
Ophenyweni olwenziwe ngelaboHlanga ngalo mkhakha KwaZulu-Natal kuvele isithombe esishaqisayo nesiveze ukuthi aboHlanga bale emsileni manxa kukhulunywa ngokuzuza kulo mkhakha. Okunye okuvelayo yikuthi uHulumeni wesifundazwe usazoqhubeka nokuba yinsengakwazi yabelungu namaNdiya.
Izibalo zoMnyango Wezemisebenzi KaHulumeni okuyiwona obhekene nomsebenzi wokuqasha amabhilidi uma iminyango yakaHulumeni idinga amahhovisi noma izindawo zokugcina impahla kulesi sifundazwe kunezivumelwano zokuqashiselwa izakhiwo ezili-184 kanti kulezi zivumelwano aboHlanga banesabelo esili-15 nje kuphela. Noma kukhona lapho aboHlanga behlanganyele khona nabezinye izinhlanga, lezo zivumelwano zimbalwa. AmaKhaladi ahlomule ngesivumelwano esisodwa, abamhlophe banezingama-41 abomdabu baseNdiya banezivumelwano ezingama-82. Uma lokhu kubekwa ngezibalo zemali amaNdiya ahlomula imali eyizigidi ezingama-R400, abamhlophe izigidi ezili-R115, aboHlanga bona bacoshe kuphela izigidi ezingama-R40. Labo abasebenzisanayo beyizinhlanga ezahlukene bona bacosha izigidi ezingama-R79.
UHulumeni wesifundazwe yisiqashi
Ngokophenyo uma kufika kumahhovisi eminyango kaHulumeni eMgungundlovu, kunabantu nezinkampani ezingafike kwezinhlanu abaxebula umkhomo. Okukhala esabo isicathulo eNhlokodolobha yaKwaZulu-Natal nguDkt uMohamed kanye nenkampani iRebosis. UDkt Mohamed ungumnikazi weDavis Alexander Building lapho kukhosele khona ikomkhulu lesifundazwe loMnyango Wokuhlaliswa Kwabantu, aphinde abe ngumnini weMain City Building ne-Old Mutual Building. Wonke la mabhilidi aqashwe uHulumeni eqashele iSouth African Police Service VIP Protection and Security Services, uMnyango Wezemfundo, uMnyango Wezolimo, Ezezinhlanzi Namahlathi bese kuba uMnyango Wezasekhaya.
IRebosis ingumnini weTrizon Towers eqashwe uMnyango Wezempilo, iTreasury House eqashwe yiKZN Treasury, ibhilidi eliku-270 Jabu Ndlovu Street eliqashwe uMnyango Wezokuthuthukiswa Komnnotho, Ezokuvakasha Nezemvelo. Abanye abanamabhilidi aqashwe uHulumeni yiCollins Group enamabhilidi aqashwe uMnyango Wezokuthuthukiswa Komnotho, Ezokuvakasha Nezemvelo noMnyango Wezemfundo, kube yiBillion Group ibhilidi layo eliqashwe uMnyango Wezokuthuthukiswa Komphakathi kanye no-Alex Dube obhilidi lakhe liqashwe uMnyango Wezolimi, Amahlathi Nezinhlanzi.
Izigidi i zamarandi ezingama-401: ziya emaNdiyeni
Izigidi zamarandi ezili-115: ziya kubelungu
Izigidi zamarandi ezingama-40: ziya kwaboHlanga
Izigidi zamarandi ezingama-79: ziya kuzinhlanga ezibambisene
82: izivumelwano namaNdiya
41: izivumelwano nabelungu
15: izivumelwano naboHlanga
01: izivumelwano namaKhaladi
09: izivumelwano phakathi kwabelungu naboHlanga
02: izivumelwano phakathi kwabamhlophe namaNdiya
08: izivumelwano phakathi kwabamhlophe, amaNdiya naboHlanga
Ebuzwa ngalolu daba, uMphathiswa Wezemisebenzi KaHulumeni Nokuhlaliswa Kwabantu, uMhlonishwa UNeliswa Nkonyeni, uvumile ukuthi kunenkinga enkulu kule mboni. “Inkinga iqale ikakhulu ngonyaka wezi-2002 lapho uHulumeni waKwaZulu kanye neSishayamthetho bethathe isinqumo sokuthi ikhayakhulu lesifundazwe kube yidolobha laseMgungundlovu. Labo ababevele sebenemali bathatha leli thuba ukuthi bathenge izindawo
namabhilidi. Ngaleyo ndlela bahambela phambili bonke abanye ikakhulukazi aboHlanga,” kusho uNkk wakwaNkonyeni.
UMphathiswa uqhube wathi: “Kulichilo ukuthi eminyakeni engama-25 kubusa uHulumeni wentando yeningi akukho guquko olwenzekile embonini. Asibandlululi kodwa kufanele silikhulume iqiniso lokuthi abomdabu baseNdiya kanye nabamhlophe yibo abahlomulayo.”
UNkk wakwaNkonyeni uthe abanye balabo abaqhoqhobele le mboni banamaqhinga okwethusa uHulumeni uma enza imizamo yokuthi kuhlomule aboHlanga. “Elinye lamaqhinga abawasebenzisayo ukuthi uma ithenda inikwe owoHlanga bafake isicelo sokuphikisa isinqumo soMnyango Wezimisebenzi KaHulumeni kuBid Appeals Tribunal. Uma kuphuma isinqumo lapho babe sebedlulela ezinkantolo lapho icala lithatha iminyaka ukuthethwa. Ngesikhathi icala lisathethwa uMnyango uzithola uphoqeleka ukuthi welule isivumelwano sokuqashilena ngendawo esisuke sikhona ngoba uMnyango kaHulumeni osuke uyisebenzisa kungafanele uzithole usengenandawo yokusebenzela,” kusho uMphathiswa uNkonyeni.
Mayelana nokuthi uHulumeni wenzani ngalesi simo, uNkk wakwaNkonyeni ubeke ngokuthi ngonyaka odlule uMnyango Wezemisebenzi KaHulumeni KwaZulu-Natal uqhamuke nenqubomgomo yokuguqula isimo saboHlanga. Ngokwale nqubomgomo kunemiyalelo okufanele izisebenzi zikaHulumeni ziyilandele. Le miyalelo ibandakanya ukuthi uma kukhona umnyango onamahhovisi angaphansi kwangama-900m2 leso sicelo sibhekiswe komastende boHlanga kuphela, ukugqugquzelwa kwezivumelwano zokusebenzisana phakathi komastende abamhlophe okuyibo abanamandla kanye naboHlanga, kanye nokuvuselelwa kwamabhilidi kaHulumeni asesimweni esingesihle bese eqashiselwa aboHlanga. Le nqubomgomo iphinde igqugquzele ukunikezwa kwamathuba abameli bamatayitela boHlanga kanye nabathengisa izakhiwo boHlanga.
Uthe enye indlela okuqondwe ngayo ukulekelela aboHlanga abafuna ukuhlomula kule mboni ukukhishwa kwencwadi ebophezela uHulumeni ekuqasheni ibhilidi kungakapheli izinsuku ezingamashumi amathathu isinqumo sikhishiwe. Lokhu kuzosiza owoHlanga onale ncwadi ukuthi akwazi ukufaka isicelo sokuxhaswa yibhange. Lokhu kwenziwa ngoba akwenzi umqondo ukuthi umuntu athenge ibhilidi ngoba efuna ukufaka isicelo sethenda ukuze liqashwe. Uma engaphumelelanga esicelweni sakhe kusho ukuthi usehleli nebhilidi angazi ukuthi uzolenzani, ibhange libe lingqongqoza lifuna inkokhelo.
Okunye okuvela noMnyango nokungahle kulekelele aboHlanga ukuthi le nqubomgomo iphoqa omastende ukuthi baqinisekise ukuthi isigidi nesigidi esikhokhwa uHulumeni njengerenti kumele kuqashwe umuntu osemusha woHlanga oyedwa. Laba abaqashwayo kufanele baqeqeshwe kwezokuphathwa kwamabhilidi.
Ngokwale nqubomgomo aboHlanga bazokwazi nokuthi bafake izicelo zamathenda eMnyangweni besebenzisa izivumelwano abanazo nomastende ezibavumela ukuthi baqashise ngawo. Lokhu kusho ukuthi akusadingeki ukuthi owoHlanga abe nobunini bebhilidi ukuze afake isicelo sethenda yokuqashwa kwendawo noma ibhilidi. “Ngalokhu sithemba ukuthi owoHlanga osuke engene kulesi sivumelwano uyakwazi ukuthi abeke imali ukuze ngelinye ilanga azithengele elakhe ibhilidi. Okwenze siqhamuke nale ndlela ukuthi sibonile lapho aboHlanga beyingxenye yenkampani yalowo obevele ehlomula begcina bengazuzi lutho kuze kuphele isivumelwano sokuqashiselana. Lokhu kwenzeka ngoba lowo obevele ezuza eboleka imali enkulu ngamabomu ebhange ukwenzela ukuthi ingabibikho esalayo uma sekukhokhelwe ibhange nezinye izindleko zenkampani.
“Ngicela abantu bakithi basondele ngoba kule mboni yilapho umnotho ukhona ngempela. Sifisa aboHlanga, abasha, abaphila ngokukhubazeka abesibhuda nezingwevu zombutho wempi bahlomule. Yize kunezinhlelo zokwakha isizinda lapho wonke amahhovisi kaHulumeni ezoba khona, lokho kusekude ukwenzeka njengoba izwe likunzikamnotho. Ngakho-ke amahhovisi sisazodinga ukuwaqasha,” kusho uMhlonishwa uNkonyeni.
ElaboHlanga libe selimbuza ukuthi umsanka lo okhonjwa eMnyangweni ngethenda okuphakanyiswe ukuba kunikwe uNks uXulu nebiza izigidi, ekutheni ngeke yini ungcolise imizamo kaHulumeni yokufaka aboHlanga kule mboni. Kulokhu uphendule wathi: “UMnyango ubusakhiphe isaziso seNhloso Yokunikezela Ithenda okuwumthetho wokuthenga kuHulumeni. Le nkampani efake isikhalo ayizange ifike emhlanganweni oyimpoqo wokuchazelwa ngethenda, ngakho-ke ayinasabelo kulolu daba futhi ayinazo zonke izidingo ezibhalwe kuthenda njengoba kudingeka izinkulungwane ezili-15m2 kanti inezinkulungwane ezili-11m2. Nezindawo zokupaka izimoto ezidingekayo zingama-600. Inkampani kaNks wakwaXulu inazo kanti inkampani ekhalazayo inali-172 kuphela. Kufanele-ke kube nomehluko emananini.”
Uqhube wathi: “Kusawububhoklolo nje balabo abebevele behlomula. Elinye iqhinga abalisebenzisayo ukuthi baqashe abazokuphenya wena othole ithenda ukuze bakusabise futhi basabise noMnyango. Kuhle-ke ukuthi lolu daba selusezithebeni zeBid Appeals Tribunal, thina njengoMnyango sizohlonipha isinqumo seTribunal.”
Uqhubeke wathi njengoba sebeqalile nje ukusondeza aboHlanga akekho ozobasabisa: “Ububhoklolo ngeke buphumelele. Asethuseki thina. Sizoqhubekela phambili nokuguqula imboni.”
Lalela ingxoxo ekhethekile noMhlonishwa uNkonyeni ngesonto kwiPhodikhasti yeBayede nakuNongoma
nguZakhele Nyuswa Sep 25, 2020